Kugadzirisazve E-mail: 6 Zvimiro Zvinoda Kufungazve | Martech Zone
Kugadzirisazve E-mail: 6 Zvimiro Zvinoda Kufungazve
China, Gumiguru 8, 2015 China, Gumiguru 8, 2015 Richard Smullen
Zvichienderana nekuti ndiani waunobvunza, e-mail yanga iriko pakati pemakore makumi matatu nemakumi mana. Kukosha kwayo kuri pachena, nezvikumbiro zvinotenderera pane zvese zvemagariro uye zvehunyanzvi zvinhu zvehupenyu. Izvo zvakare zviri pachena, zvakadaro, ndeyekuti yechinyakare e-mail tekinoroji iri chaizvo. Munzira dzakawanda, e-mail iri kuiswazve kuti irambe ichikosha kune zvido zvinokura zvevashandisi vanhasi.
Asi kangani iwe paunogununura nechimwe chinhu usati wabvuma kuti pamwe nguva yacho yapfuura? Paunotanga kuongorora misungo yeemail uye nekuona nzvimbo dzekuvandudza, unotanga kuona kuti 'e-mail 2.0' ingasiyana sei kana yakavakwa ikatangwa nhasi. Ndezvipi zvinhu zvingasanganisirwe kana kuvandudzwa? Uye chii chaizosara kunze? Dhizaini yayo nyowani ingazvikweretesa kune kumwe kunyorera?
Dai isu taizodzokorora e-mail nhasi, heano nheyo nhanhatu dzinogona kushanda seyatsva e-mail chikuva. Handizive nezvako, asi kana ndikakwanisa kushandisa ino, ndinogona kuva mumwe anofara uye anoshanda zvikuru musasa…
Hapanazve email kero
Mabhokisi edu einbox akanyatsobatikana. Chaizvoizvo, maererano neRadicati Boka, 84% yeemail yakagamuchirwa nhasi spam. Nekuti izvi zvakapusa: e-mail kero yakavhurika. Chero ani zvake munhu anoda email yako uye 'voila' - ivo vari mubhokisi rako rekunyora. MuE-mail 2.0, panogona kunge paine mvumo-yakavakirwa sisitimu iyo iine imwechete yekuzivisa. Uye chinongedzo ichi chinosara chakavanzika senhamba yemunhu.
Kana tangowana iyo 'kuzivikanwa' uye nzira yemvumo yevashandisi chaipo, tinogona kubvisa iyo inbox. Hongu, inbox. E-mail 2.0 yaizoshandira zvirinani mabhizinesi nevatengi kana yega 'hurukuro' kana yega tambo yemeseji yakapfuura 'kubata zvese' mhando yebhaketi, aka iro bhokisi reinbox. Pombi yakananga pakati pebhizinesi nenhengo dzayo dzevateereri ingangove gadziriso inogamuchirwa.
Iko kuvhurika kweemaimeri kero uye barrage ye spam zvakare zvinoreva kuti tave kujairira hutachiona, kubiridzira kuedza, uye chitsotsi. Pasina kuvimbika, chero chinhu chinopfuura 'kubhadhariswa kumashure' chinorambidzwa. Saka, ne-e-mail 2.0, tinoda kukwanisa kubhadhara zvikwereti, kusaina magwaro akavanzika nekupa pamusoro penzvimbo yekuziva. Izvi zvinogona kungoitika chete kana chiteshi chakachengeteka, chakanyatsonyorwa chikavhurwa pakati pemutumi nemugashiri nokudaro kuve nechokwadi chekusaramba.
Yechokwadi nguva kutaurirana nekuzvidavirira
Paunotumira email meseji, chii chinoitika kwazviri? Iyo yakaraswa, yakabatwa neye spam firita, ikaverengwa, ikasateererwa? Chokwadi ndechekuti; hauzive. Iine e-mail 2.0, kuzvidavirira uye kuburitsa zvichave kumberi nepakati. Zvakawanda senge kuti mameseji anoshanda sei, yedu e-mail yeramangwana ichave-inotumirwa-based uye kukurudzira chaiyo-nguva, kunangana kwakananga. Nguva dzose iripo uye inogara ichishanda.
Iko kukurumidza kukura kwe mobile kunoratidza kuti ingangove inguva yeplatform iyo yakagadzirirwa chete ne mobile-kushandiswa mupfungwa. Hupenyu huri kufamba nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvavakaita makore makumi matatu apfuura uye neizvozvo, maenda marefu maemail uye fancy HTML mifananidzo isingashande chinangwa. Vanhu vanosarudza kutaurirana vachishandisa chete mashoma mazwi, kazhinji kuburikidza nechaiti chikuva. Saka e-mail 30 yaizofanirwa kuona kubatana kuri nani; ipfupi, inokodzera uye yakagadzirirwa kuverenga panharembozha zvisinei kuti ari kupi ari mupi wepasi.
Kunyangwe izvi zvaigona kureva zvakanyanya muhupenyu hwedu, izvi zvinongedzo zviri kumafaira akasungirirwa kuemail akatumira nzira yedu. Wepakati American anoshandisa ingangoita maminetsi matanhatu pazuva kutsvaga zvinongedzo uye mafaera. Izvo zvinoshandura kusvika kumazuva matatu ekurasika goho pagore. E-mail 2.0 pasina mubvunzo yaizonzwisisa kuti ndezvipi zvakanamatira zvataive tichigamuchira nekuzvibata nenzira kwayo. Faira iri ipapo, fambisa iro pano. Maka iyi yekubhadhara etc.
Tags: ee keroemail attachmentemail dhizainiemail kufamba
Richard Smullen ndiye CEO we Pypestream. Iye akamboshanda semubatanidzwa uye CEO weGenesis Media LLC, chizvarwa chinotevera akawanda midhiya, chaiyo-nguva vhidhiyo kushambadzira chikuva.
Maitiro Ekuyera Nharaunda Yemagariro Kubudirira